Imibuzo Yokubuza Umntu Wakho Osebenzayo Omtsha
Xa udibana ne-arhente ye talent, kubalulekile ukwazi ukuba i-arhente ekhangele ntoni kwaye ufuna ntoni ngaphambi kokuba usebenze kunye. Ukubuza imibuzo efanelekileyo kwintlanganiso yakho kukunceda ukuba ubone ukuba ubambiswano luya kunceda. Kwakhona, ukujonga indlela yokuziphatha kwintsebenziswano kwintlanganiso yakho kwaye nokuba yintoni i-ofisi ibonakala ngayo yimiba ebalulekileyo yokuqwalasela. Ngokomzekelo, ngaba iofisi iyindawo yentlekele epheleleyo?
Ngaba i-arhente ibonakala ingathandeki kuwe? Ukuba kunjalo, mhlawumbi asikho uphawu oluhle. Kufana nokuthandana. Injongo kukufumana umdlalo ukuze amaqela omabini anomdla omnye kunye, kuba yilapho kwenzeka umlingo wenyaniso.
Ukuzithemba kukubalulekileyo. Wena njengomdlali ngumntu olawulayo kule ntlanganiso, kwaye ungumphathi. Xa uqala ukuqala e-Hollywood, unokufumana amaqela amaninzi azama ukwenza njengomphathi wakho kwaye uzama ukubiza zonke izibhengezo zomsebenzi wakho. Akuyona indlela esebenza ngayo. I-arhente kunye nomlingisi kufuneka basebenzisane kunye, ngokuvisisanayo kunye nokunxibelelana kakuhle, ukuze impumelelo ivele. Njengoko kunjalo naluphi na ulwalamano, xa elinye iqela lifuna kakhulu okanye lilawule, ngokuqhelekileyo akupheli ukusebenza kakuhle. Nenjongo yokusebenza nomntu onobomi obuhle kunye noxhumano.
Imibuzo yokubuza uMmeli weTalente
Kubalulekile ukufumana ulwazi oluninzi malunga ne-arhente ngokunokwenzeka.
Nazi izinto ezintathu ezibalulekileyo omele uhlale uzibuza.
Yintoni Isicwangciso Soshishino?
Ukulungiselela iinjongo kunye nokucwangciswa kweenjongo kubaluleke kakhulu. Ngokuqhelekileyo, umbuzo wokuqala ukuwubuza kukuba, "Siyintoni isicwangciso sethu, isisilumko-silumko, ukuze sisebenzisane nathi? Sinokubanceda njani omnye nomnye ukuba aphumelele kwaye enze imali? "Khumbula, oku kubonisa ishishini , kwaye yonke into isoloko ihla imali.
Naka ingqalelo indlela aphendule ngayo lo mbuzo. Abanonophelo abasemagqabini apho banomdla wokuncedisa, kwaye banemiqondo enhle yokwabelana nawe! I-arhente enkulu iya kuthi, ifuna ukuphulaphula zonke iingcamango wena njengomdlali we-career yakho, kwaye wabelane ngoluvo lwabo.
Buza i-agent ukuba ikunike ingcamango yokuba bazimisele njani ukukunceda ukukhusela iincwadi zokuphicothwa. Qinisekisa ukuba "baya kumisa" wena, kwifowuni nakwi-imeyile, ukuhambisa abalawuli. I-arhente ehlezi ekhaya kwaye ukuchofoza "ukungeniswa" ayiyi kuphinda iphinde ibe yimpumelelo njengomntu oqhubela phambili ukufika emnyango. Ukusebenza ngokufanelekileyo kuhlala kukuhle! (Kakade, njengabalingisi, abo bahlala ekhaya nabo abayi kuphumelela njengabo baphuma apho, ngalunye usuku , kwaye basebenze nzima kunokwenzeka kwiinjongo zabo.)
Ukuxhunywa ngokuxhomekeke Kona kuYo shishino?
Ngenxa yokuba umntu "i-agent agent" akuthethi ukuba bathe baxhomekeke kakhulu kumashishini aseHollywood abangakunceda. Yintoni ebeka le nkonzo ngaphandle kwamanye amakhulu aseLos Angeles? Kubalulekile ukucela i-ejenti malunga nomnxeba wakhe kunye nemvelaphi yakhe, ngakumbi xa kuziwa ekuqhubeni abalawuli.
Amaqela amaninzi asekwayo ngabahlobo ngokugxotha abalawuli kunye nabanye abaqeqeshi bezoshishino, kwaye oku kunokukunceda bobabini. Ubani na owaziyo "kubalulekile apha eHollywood, (njengokuba ngubani owaziyo), kunye nabaqeqeshi bamashishini abangakumbi ukuba wena kunye ne-agent yakho uyazi, bhetele amathuba akho ukuba angene kuyo ukuphicothwa ngaphezulu. Kwakhona kubaluleke kakhulu ukubheka apho i-agqwetha imele. Ingaba i-ejenti imela abalingisi abaninzi abasebenza ngoku? Ukuba kunjalo, ngokuqhelekileyo kukho uphawu oluhle.
Oku akuthethi ukuba i-arhente enokuba "entsha" kwishishini okanye isenokuba nokwakha oonxibelelwano ngokwabo, ayikwazi ukuba yinto efanelekileyo kumsebenzi wakho. Kodwa akunakuphikiswa ukuba ukuba i-arhente yakho ayifuni ukusebenza kanzima, okanye ayinabo oonxibelelwano okanye "idonsa" ukuze ubone ngokushiywa, kungabakho ukuchitha ixesha lokuba bobabini nisebenze kunye.
Kutheni Kuthiba Nentshisekelo Kuwe?
Kukho amawaka abalingisi apha kwiLo yedwa, ngoko uhlala kuphi na i-arhente? Buza i-arhente yakho enokwenzeka malunga neqela lakhe lomthengi. Amathuba kukuba awunakongezwa kwiqela le-agency kunye nomntu obonakala ngathi nje kodwa ucele noma kunjalo. Xa abalingisi ababini bebukeka befana kakhulu kwaye bamelelwa ngumbutho ofanayo, ngamanye amaxesha kungadala ukungquzulana neengxelo. Ufuna ukuba yinto ephambili kwixesha le-arhente yakho, kungekhona iwele lakho elide elide, nangona ukuba ungumdlali omkhulu. Nangona kunjalo, kufuneka kuqatshelwe ukuba, nangona umntu efana nawe kwikota ye-agent, akusayi kuba yingxaki. Uyakwazi uhluke ngokupheleleyo njengomdlali kumntu omnye onjengawe. Qiniseka ukuba ubuze i-ejenti malunga nayo. Musa ukulibala, kukho enye kuphela kuwe, kwaye ngumntu wakho ohlala ekwahlukana nantoni na enye!
Le mibuzo emithathu ingasetyenziswe njengesikhokelo sokufumana ulwazi kwintlanganiso ye-arhente. Kodwa ke, zihlala zibuza imibuzo eninzi njengoko uziva unyanzelekile. Kwaye kubaluleke kakhulu, soloko u thembela zakho izilwanyana. Ukuba unesivakalelo esihle okanye esibi, hamba naloo mvakalelo.
Iinyathelo ezili-15 zokuPhucula uVavanyo
Ulawulo lwe-Scale: Kwi-Cutting Edge yeNew Media
Izibhengezo zentlalo kwiilwimi zesiNgesi
Zama oku ku-Lag Ukubeka i-Drill yokuLawula umgama kwiMifino
Iilwimi zesiTaliyane: Iindleko
Iproto-Cuneiform - Ifom yokuqala yokubhala kwiPlanethi yoMhlaba
Izinto ezili-10 ozoziwayo malunga ne-Deepwater Horizon Oil Spill
10 Amazwi Ngama-Conquistadors aseSpain
Indlela uMcCain-Feingold Yehlulekile Ukutshintsha Kwezopolitiko zaseMerika
Yintoni 'i-Daijoubu' ithetha ngesiJapan?